देउती अस्पताकाे नयाँ याेजना सुर्खेतका पत्रकारहरुलाई उपचारमा १० हजार छुट दिने – Yug Aahwan Daily
देउती अस्पताकाे नयाँ याेजना सुर्खेतका पत्रकारहरुलाई उपचारमा १० हजार छुट दिने
युग संवाददाता । १२ बैशाख २०७८, आईतवार १८:५० मा प्रकाशित
सुर्खेत । सुर्खेतस्थित देउती अस्पताल प्रालिले सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा देउती अस्पतालले आइतवार उपचार शुल्कमा १० हजार बराबरको उपचार खर्चमा छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. लोकेन्द्र थापाले पत्रकारहरु पनि समाजमा हरेक घटनामा अग्रपंक्तिमा खटिने भएकोले महासंघ सुर्खेत शाखाको समन्वयमा सुर्खेतका पत्रकारहरुलाई उपचार सेवामा १० हजार बराबरको छुट दिइने बताए ।
उनले पत्रकारहरुसँग देउती अस्पताल सहकार्य गरेर जान चाहेकोले यो घोषणा गरेको उल्लेख गरे । केही दिनभित्र महासंघ र अस्पतालवीच सो सम्वन्धमा लिखित सहमति गरिनेछ ।
देउती अस्पताल प्रालिका डा. शुभ श्रेष्ठले देउती अस्पतालले कर्णाली प्रदेशमै नयाँ सेवासुविधाहरु थप गरेर उपचार थालिएको दावी गरे । उनले भाँच्चिएको हिप जोडेर प्रदेशमै पहिलो पटक नयाँ काम गरेको उल्लेख गरे ।
साथै अस्पतालले बाहिरबाट दक्ष चिकित्सक ल्याएर सुपर विशेषज्ञ सेवा पनि संचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले अस्पतालबाटै सेवा दिएर यहाँका बिरामी बाहिर जान नदिन आफूहरु प्रयासरत रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बसेलले देउती अस्पतालले महासंघसँग सहकार्य गरेर पत्रकारहरुलाई उपचार शुल्कमा १० हजारसम्म छुट दिने घोषणा गरेकोमा धन्यवाद दिए ।
उनले आगामी दिनमा पनि महासंघ सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताउँदै यसबाट जिल्लाका पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक व्ययभारमा केही राहत महसुस गर्ने बताए ।
सो अवसरमा देउती अस्पताल प्रालिले नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिहरुलाई सम्मानसमेत गरेको छ । सम्मान कार्यक्रममा देउती अस्पतालका संचालकहरु डा. पारश पौडेलसहित, डा. अम्बु थापा, डा. कविता थापासमेतको उपस्थिति थियो ।